Vanoita tsvakurudzo vakakosha: rcz | Kwayedza
Vanoita tsvakurudzo vakakosha: rcz
28 Dec, 2018 - 00:12	 2018-12-27T08:04:37+00:00 2018-12-28T00:03:50+00:00 0 Views
SANGANO reResearch Council of Zimbabwe (RCZ) rinoti vanoita tsvakurudzo muzvikoro nekumabhizimisi madiki neari pakati nepakati vane basa guru mukuvandudza upfumi hwenyika pamwe nemagariro evanhu akanaka.
Executive director weRCZ, Mai Susan Muzite, vanoti sangano ravo richaita musangano mukuru munguva pfupi iri kutevera nechinangwa chekubatanidza vanoita tsvakurudzo kubva kuzvikoro, makambani nemamwe mapoka.
Musangano uyu unotarisirwa kuitwa kubva nemusi wa13 kusvika 15 Kukadzi 2019.
“Sesangano, tiri kuti vanoita zvetsvakurudzo vanofanira kuwana mukana wekushanda pamwe chete vachipangana ruzivo rwetsvakurudzo dzavari kuita dzakasiyana-siyana. Musangano watakaronga wegore rinouya uyu ndiwo mukana watiri kupa vadzidzi kubva kumayunivhesiti, vemabhizimisi ari pakati nepakati neayo makuru uye nyanzvi dzetsvakurudzo kubva kune dzimwe nyika kuti varatidzire tsvakurudzo dzavo pamwe nekupangana mazano,” vanodaro.
Vanoenderera mberi vachiti, “Chinangwa chikuru chemusangano uyu kuti nyika yedu ivandudzike munyaya dzeupfumi, sainzi pamwe nekuvandudzwa kwemagariro evanhu munharaunda dzakasiyana.”
Mai Muzite vanoti tsvakurudzo yakakosha sezvo ichibatsira munyaya dzakasiyana dzinosanganisira kutsvaga nzira dzekusimudzira upfumi hwenyika.
“Pamusangano uyu zvakare tiri kupa mukana kune vanoita tsvakurudzo kuti vape pfungwa dzekuti nyika yedu ivandudzewo nzira dzetsvakurudzo dzinoenderana nepasi rose uye kuti ive nanamazvikokota vetsvakurudzo vemhando yepamusoro vanokwanisawo kuita tsvakurudzo chero kunze kwenyika,” vanodaro
Mai Muzite vanoti seRCZ, vari kutarisirawo kuti musangano uyu uchashanda senzira yekuumba ruzivo rwunovandudza upfumi hweZimbabwe.
“Vemabhizimisi madiki neari pakati nepakati tiri kuvakurudzira zvakanyanya kuti vauye sezvo vari ivo vanobata upfumi hwenyika zvakanyanya. Saka vakadzidza kubva kutsvakurudzo dziri kuitwa dzemabhizimisi vanobatsirwa mukusimudzira nyika yedu,” vanodaro.